जय देश ! जय युवा !! - Sajhamanch
२०७८, जेठ २ गते दिउसोको ०३:४८:२९ बजे Sunday 16th May 2021
February 10, 2021 8:22 am तुलसी बस्नेत (सौरभ)
अहिलेको आमसभामा भेला हुने भिड देख्दा लाग्छ नेपालमा जनता भन्दा कार्यकर्ता बढी छन् । खबर आउँछ जनताले सबै दलका शिर्ष नेताहरुको विरोध गर्छन् भनेर अनि फेरी उहि नेताले आह्वान गरेको भेलामा थामी नसक्नुको भिड जम्मा पनि हुन्छन् । जनतामा पनि चेतना जाग्न जरुरी छ । जबसम्म हामी सचेत र जागरुक हुँदैनौ तबसम्म यी जुकाहरुले हाम्रो खुन चुसी नै रहने छन् ।
देशमा स्थिरता आओस्, समृद्धि र विकास आओस् भन्ने हेतु नेपाली जनताले २०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी विरुद्ध खरो उत्रिएका बामपन्थी नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दललाई बहुमतको जित दिलाई सरकारमा पु¥याए । चुनाव ताकाका उनको भाषण पनि उही तवरकै थियो । उनको प्रत्येक भाषणमा समृद्धि र स्थिरताको नारा झल्किन्थ्यो । देशमा सुशासन र विकासको जग हाल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै देशव्यापीरुपमा भाषण गरेर चुनाव जिते । तत्कालिन माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गरेको घोषणा गरी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र बाडँफाँड गरी उम्मेद्वार उठाए र झण्डै दुई तिहाइ बहुमतले चुनाव जित्न सफल दल बन्यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । एकीकरण ताकानै दुई समान अध्यक्षको प्रावधान बनाएर चुनावमा होमिएका केपी र प्रचण्डको चुनाव जितेपश्चात छेपारोले रंग फेरे जसरी नै रंग फेरियो ।
जसरी छेपारोले परिस्थती अनुसार रंग फेरेर झुक्याउछ, टार्छ । त्यसरी नै केपी–प्रचण्डले पनी चुनावका बेला एउटा रंग पहिरिएर जनतालाई झुक्काए अनि पछी आ–आफ्नो रंगमा फर्किए । पाँच वर्षमा देशको रंग फेरिदिन्छु भन्नेले ४ वर्ष नपुग्दै आफ्नै रंग फेरे । कोरोनाकालमा देश कहाली लाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिदै जाँदा राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्री, शिर्ष दलका नेता सबै नै जनतालाई घरमा थुनेको मौका छोपी आफ्नो दुनो सोज्याउन तछाड मछाडमा लागे । सत्ता जोगाउने देखि लिएर पल्टाउने खेलसम्म खेल्न भ्याए सबै । आखिर जनताले दिएको बहुमत यहि तान्डव मच्चाउनलाई हो त ?
मिलेर खान पाउने ठाउँमा आन्द्रा जोडेर हिँडछन् अनि जब एउटाले खान पाउँदैन तब पार्टीका कार्यकर्ता सडकमा उतारेर विरोधको नाममा आम जनतालाई सास्ती दिन्छन् । जनताले खाइ न खाइ दुःख गरेर, दोब्बर कर तिरेर जोडेको सवारीसाधन जलाउने हुकुम दिन्छन् महामहिमहरु । आफू पजेरोमा चढेर बन्द सफल पार्न सडकमा निस्किन्छन्.। समृद्धि तर्फ उन्मुख गराउँछु भन्दै चुनाव जित्नेहरुले नै आज देशलाई फेरी करिब १० वर्ष पछाडी धकेलेका छन् । जनस्तरबाट नेतृत्वमा रहेका पुस्ताबाट स्थानान्तरण भइ देश युवा पुस्ताका नेताहरुले चलाउनु पर्छ भन्ने चर्को आवाज उठिरहेको छ । युवा पुस्ताले देशको नेतृत्व नलिए अब देश दुर्घटनामा पर्छ भन्दै आवाजहरु बुलन्द भइ रहेका छन् ।
तर नेकपा विभाजनको प्रसंगले युवा पुस्तामा पनि कुनै दम छैन भनेर छर्लङ्ग नै पारिदियो । व्यक्तिगत स्वार्थको जगमा टेकेर नेकपा दुई समुहमा विभाजन हुँदै गर्दा यदि अहिलेको युवा नेतामा साँच्चै नै दम हुन्थ्यो भने सम्पूर्ण कम्युनिस्ट युवा नेताहरु एक ठाउँमा उभिनु पर्ने थियो । तर, बिडम्बना त्यसो हुन सकेन । युवा पुस्ताले पनि बाबुको सिको छोराले गरे झैँ आफ्ना गुटको नेता जो छन् उसकै पछि लागेर आफ्नै पार्टिका नेता कार्यकर्तालाई गाली गर्न अग्रसर देखिए ।
बन्द हडतालले देश बन्दैन भन्ने चेत अझै हाम्रा नेताहरुमा नभएकै त होला नि । मार्सि चामलको भात खानेहरु आज आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुँदा सडकमा बसेर चिउरा चपाउँदैछन् । देश फेरी पनि यिनै जुकाहरुलाई सुम्पियौँ भने हामीले त दुःख पायौँ पायौँ हामी पछाडीका ले झन् बढी दुःख पाउने निश्चित छ । त्यसैले अब नेतृत्व लिने युवाले नै हो । गरेपछि हुन्छ भन्ने उदाहरण त लोडसेडिङको अन्त्य गरेर कुलमान घिसिङले दिइसकेका नै छन् । राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्र खोलेर महाबिर पुनले देशमा विज्ञान र विकासको सम्भावना छ भन्ने देखाइसकेका छन् । इच्छा शक्ति र दृढ विश्वास भए एउटा पत्रकारले पनि हजारौँको उद्धार र भ्रष्टचार उन्मुलन् गर्न सक्छ भन्ने पेचीलो नमुना रवि लामिछानेले दिइसकेका छन् । हो त्यसैले अब सम्पूर्ण युवाहरुले आ–आफ्नो ठाँउबाट सृजनात्मक ढंगले नेतृत्व लिनुपर्छ र राष्ट्र निर्माणमा जुट्नु पर्छ । अहिले नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्ने ।
February 10, 2021 8:22 am | राजनीति,विचार/ब्लग